Sheeko-faneed – Indheergarad
207 View Indheergarad – April 8, 2022 – Vol: 02 – Cadadka: 105aad Goor ay cadceeddu liiq tahay oo garabkeeda sidii hoos loo cadaadiyay ay madaxa qarsatay ayaan soo dhaqaaqay. Halkii aad igu ogayd iyo aqalkaygii oo aan […]
1,437 View Indheergarad – Maarij 14, 2022 – Lammin – Vol: 02 – Cadadka: 104aad Milaygu waa gu’ barwaaqo ah oo janno adduun ayay reeruhu ku jiraan. Waa caanaddaadis oo ma jiro hal qoys oo xirsi loo qaado. Cirku […]
1,667 View Indheergarad – Ogos 29, 2021 – Koobin – Vol: 01 – Cadadka: 100aad Way is gaabisay, qunyar ayay shaf gariiraya dhulka dhigtay. Qabowga iyo qallafsanaanta daran ee dhulka ayay dareentay se dan kama aysan […]
1,278 View Indheergarad – Feebarweri 13, 2021 – Sooroga – Vol: 01 – Cadadka: 84aad Si geylaansan ayaa ay dhulka u jiiftay, luquntana kor ayay u soo qaadday si ay ula socoto waxa hareeraheeda ka dhacaya. […]
1,075 View Indheergarad – Jeenaweri 30, 2021 – Vol: 01 – Cadadka: 80aad Safrad kulul ayaa hurdada iga toosisay, taas oo soojeedkii badnaa ee xalay sababay. soo dhawaadkii ayaan seexday sidii aan sariirta u galgalanayey. xalay […]
2,804 View Indheergarad – Jeenaweri 03, 2021 – Koobin – Vol: 01 – Cadadka: 72aad Roobkii galabta bilowday ayuun baa hadda qaaday. neecowda roobkani aad ayey ugu egtahay middii aynu ka daawan jirnay filimaantii hindiga ahaa, […]
17 View Indheergarad – Noofenbar 12, 2020 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 67aad Aadan weligii wax ma baran, si hagaagsan wax u ma akhriyo waxna u ma qoro. Balse wuxuu aabbihii oo xerow ahaa ka bowsaday […]